>UINITY IS STRENGTH! | News, Art and Ideas For Burma
>UINITY IS STRENGTH!
Filed under: OTHERS' WRITINGS, UNITY IS STRENGTH — Nyo Gyi @ 12:21 am
(An Article From – http://saveburma.sosblog.com/Burma-political-blog-b1/Time-to-Unite-b1-p50370.htm)
Sadly, some people (i don’t mean all) i saw on exile are earning money for themselves from fund raising activities for our country. How bad it is ? I am sure that some of the people do their best.
” We have to unite and makearespectable organization exile which links to all other countries and people in our country, Burma”
(မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုသူ – ညိုကြီး)
၀မ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့၊ ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အချက်တစ်ချက်ကို ပြောရရင် ပြည်ပရောက် အချို့သော အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားတွေ (အားလုံးကို မဆိုလိုပါ) ဟာ ဗမာပြည်အတွက်၊ ဗမာပြည်အတွက် ဟစ်ကြွေးပြီးသကာလ ပြည်ပမှာ ကောင်းကောင်းစား၊ ကောင်းကောင်းနေနိုင်ဖို့အတွက် ၀င်ငွေတွေထပ်ထပ်တိုးအောင်သာလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြတာပါ။ ကဲ…ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ အဖြစ်လဲ။ ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းသလဲ။
ကဲ…အခု ကျွန်တော်တို့ ဗမာပြည်အတွက် နောက်ထပ် ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလဲ။
“ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်း ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ပေါင်းတိုက်မှ ရတော့မယ်။ ဗမာပြည်ပြင်ပ တိုင်းပြည်အသီးသီးမှာရောက်နေတဲ့ အတိုက်အခံတွေရော၊ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အတိုက်အခံတွေရောနဲ့ပါ အားလုံးချိတ်ဆက်စုပေါင်းထားတဲ့ တစ်ခုတည်းသော အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ညီညွတ်စွာ ပေါင်းဖွဲ့မှရတော့မယ်” ဆိုတာပါပဲ။